Barcelona oo ka hadashay xaalada dhaawac ee Suarez & mudadda uu garoomada ka maqnaanayo oo la sii ogaaday – Gool FM
(Spain) 17 Agoosto 2019. Kooxda Barcelona ayaa war ka soo saartay maanta oo Sabti ah heerka uu gaarsiisan yahay dhaawaca kasoo gaaray Luis Suarez, inta lagu gudi jiray kulankii ay xalay la ciyaareen kooxda Athletic Bilbao ee furitaanka horyaalka La Liga xili ciyaareedka cusub.
Luis Suarez ayaa dareemay xanuun lugtiisa midig ah, waxaana laga saaray garoonka iyadoo uu tababare Ernesto Valverde ay qasab ku noqotay in badalkiisa uu keensado Rafael Alcántara.
Warkan ay kooxda Barcelona ka soo saartay dhaawaca Luis Suarez ayaa lagu sheegay:
“Luis Suarez ayaa maray baaritaano caafimaad subaxnimadan maanta oo Sabti ah, taasoo lagu xaqiijiyay inuu soo gaaray dhaawac muruqa ee lugta midig ah, soo laabashadiisa si uu kaga qeyb qaato kulamada waxay ku xiranaan doontaa mudadda uu ku soo bogsado”.
Isla mar ahaantaas, wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa sheegay in laga yaabo in Luis Suarez uu garoomada ka mqnaado 3 ilaa iyo 4 isbuuc, sidaas darteed waxay noqon doonaa soo laabashadiisa si uu kaga qeyb qaato kulamada kooxda Barcelona, kaddib fasaxa ciyaaraha caalamiga ah ee soo socda.
Kooxda Athletic Bilbao ayaa guul dahabi ku gaartay garoonkeeda San Mamés, kaddib markii ay 1-0 kaga adkaatay Barcelona, kulankii xalay lagu daah furay horyaalka La Liga xilli ciyaareedka cusub ee 2019-20.